Madaxweyne Silaanyo oo Baarlammaanka horgeyn doona dalab dawladda Imaaraadku ku doonayso saldhig Milateri | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweyne Silaanyo oo Baarlammaanka horgeyn doona dalab dawladda Imaaraadku ku doonayso saldhig...
Madaxweyne Silaanyo oo Baarlammaanka horgeyn doona dalab dawladda Imaaraadku ku doonayso saldhig Milateri
Hargeysa(Berberanews.com)-Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ayaa la filayaa in uun labada Gole baarlamaan hor geeyo codsi ay dawlada Imaaradku kaga dalbaneyso in ay saldhig Militery ka sameysato magaalada Berbera kuwaas oo isku jira cirka iyo badda .
Warar uu Geeska Africa helay ayaa xaqiijiyey in madaxtooyada Somaliland qorsheynaso sidii labada gole baarlamaan [Guurtida iyo wakiilada ]fadhi wadajir ah uga yeelan lahaayeen dalabka Imaaradka ee ah in ay saldhig Milateri ka sameysato magaalada Berbera ee xarunta gobalka Saaxil.
Labada gole Baarlamaan ayaa la filayaa in ay durduro madaxweyne Siilanyo ugu fasixi doonan inuu saldhigyo Military Imaaradka ugua ogalaado magaalada Berbera hadii uu u gudbiyo.
Wasiirka Duulista iyo Hawda Farxaan Aadan Haybe ayaa dhawaan beeniyey war uu Geeska Africa ka soo xigtay Hay’ad warbaahineed oo fadhigeedu Ingiriiska yahay oo sheegtay in xubno ka tirsan Imaraadka carabtu u xaqiijiyeen inay Somaliland iyo Imaaradku kala saxeexdaan heshiisisafgarad oo ku saabsan saldhigyadan Milatery waxaana uu wasiirku sheegay in dawlada Imaraadku madaxweyne Siilanyo u soo gudbisay codsiga saldhigyadan base aanu wali go,aan ka gaadhin.
Previous articleQuwadda Ciidan iyo Ta Dhaqaale ee Dalka Masar (Xogta Dahsoon)
Next articleShirkadda sharciga Bariga Africa oo nooceedu dalka ku cusubyahay oo lagaga dhawaaqay Hotelka Ambassador ee Hargeysa (Sawirro)